Uyini Umkhiqizo Wangaphandle Odume Kakhulu Emhlabeni?
I-Arc 'Teryx （Canada): Umkhiqizo wangaphandle ongaphandle waseCanada, owasungulwa eVANCOUVER, eCanada ngo-1989, ikomkhulu lawo, isitudiyo sokuklama, kanye nolayini omkhulu wokukhiqiza kuseseVancouver. Ngenxa yokuphishekela kwayo okuphambene nobuciko bemisebenzi yobuchwepheshe obusha nobuchwepheshe obusha, eminyakeni engaphezu kwengu-10 nje kuphela, sekukhule kwaba ukuqaphela ...
Engxenyeni yokuqala yonyaka we-2020, ukuqubuka okungazelelwe kwe-coVID-19 kubeka imboni yezentengiselwano emhlabeni wonke, kufaka phakathi imboni yezingubo, emthelela omkhulu nasekuvivinyweni. Ngaphansi kobuholi obuqinile beCPC Central Committee, isimo sokunqanda nokulawula ubhadane eChina silokhu siqhubeka nokuba ngcono, ...
Ukuphuma ebusika, izindawo ezahlukahlukene, izikhathi ezahlukahlukene, imigwaqo ehlukene, iminyaka ehlukene, ukukhetha izingubo zangaphandle kuhlukile. Ngakho-ke ukhetha kanjani? 1. Yazi kahle lezi zimiso ezintathu Ukusuka ngaphakathi kuye ngaphandle, yilezi: ungqimba lomjuluko-ungqimba lokushisa-ungqimba olungenawo umoya. Ngokuvamile, ama ...
IShijiazhuang Hantex International Co. Ltd.
Ingabe enye yezinkampani zokuhweba eChina, egxile kwezokugqoka iminyaka engaphezu kwengu-10. Imikhiqizo eyinhloko ifaka iJakhethi, iParka, ama-Waistcoats, amabhulukwe, izikhindi, Kukonke, zonke izinhlobo zezingubo zemvula, ezifana neRaincoat, i-Rain poncho. Kanye namaphedi wamadolo, amaphakethe esihlakaleni, amathawula omisa ngokushesha, ipulasitiki ephathekayo ...